Indlela ukudala Crypto Exchange - Blockchain News
Indlela ukudala Crypto Exchange
Sinikela ukuze bakuthathele ingqalelo udliwano-ndlebe ngumseki kunye CEO ye Crypto Exchange btc-alpha.com Vitali Bodnar, indlela ukudala Crypto Exchange ukususela ekuqaleni.
Njani na oyaziyo le Cryptocurrency?
obungcali My kwezemfundo – physics, ubunzululwazi bekhompyutha, ubuchwepheshe computer, Mna rhoqo inxaxheba kuphuhliso. Ngandlel 'I ngengozi ufunde neqonga malunga bitcoin baqala ukuqonda usuku, funda yonke into ngendlela esebenza ngayo.
Njani na ukungena kushishino Crypto?
Yonke le nto yaqala nesibakala sokuba Ndandicinga indlela imigodi okwenzekayo. Emva kokuba kuthethwe inkqubo, kukho enye ingxaki – ukuba mabenze ntoni iinkozo ukuba lenza. Ndayithabatha ke imali zingxoxo, leyo, kunjalo nje, babesebenza kakhulu ke. Ngoko ke luhamba ndayeka norhwebo.
Kwakutheni ukuze ufune ukuba ufuna ukwenza i Crypto Exchange?
Oku kungenxa yokusilela yam yokuqala. I, njengaye nawuphi na umrhwebi elungileyo, yokuba neseti yemithetho andiyi kuwuhlambela: Ndicebe kwangaphambili kwindawo ephumayo ukusuka kwindawo, I azisebenzi xa ndikunye phantsi koxinzelelo, Ndizama ukuba ukulungisa minuses, kube lula ukuba silinde, Andiqondi ukubuyisa ngaloo mini ndiya ku thabatha, I uvale nje laptop yam kwaye azisebenzi. ukusilela yam kwenzeka ngenxa kuxinezeleko, yaye ngelo xesha ndohlukana yonke eminye imithetho. Ndaya kungena deal elibi, ivalwe lilo negative, wagqiba ukuzuza. Ngokuba imini, samqhubela 10 imisebenzi nale meko. Ndilahlekelwe amashumi ambalwa amawaka eerandi, endithe ndayizuza phezu ixesha elide kakhulu.
Loo nto yabuchaphazela njani nokudalwa Exchange?
Ndaqalisa ithuba lokuyihlolisisa le meko yaye waqonda ukuba umrhwebi angazuza, okanye alahlekelwe imali. Kodwa exchange isoloko in ibhaso. Ndaqonda ukuba le nto yonke into umdla kwaye ndifuna ukwenza eyakho Crypto Exchange yam.
Masenze 5 amanyathelo ukwenza Crypto yakho Exchange.
Ukwenzela mna, into yokuqala ukuba “aqhumisele ne mveliso.” Bonke abahlobo bam, nabazana, abangabazi, Ndaxelela wonke ukuba ukuyenza Crypto Exchange kwaye kwakufuneka iqela, abantu, imali, kwaye wonke Wathi oko kwakuya ayisebenzi, kodwa waba nokholo crazy. Konke oku kwaba malunga ku 2014-2015.
Ekubeni wayesaziwa entle ekuphuhliseni iiprojekthi, ngoko nangoko abantu owayebonakele bengakholwanga le cryptocurrency, hayi kwi Crypto Exchange, kodwa mna nje developer qamba imveliso.
ekuqaleni, I waba necebo ukuba ungathatha kwisiseko lilungile-ezenziwe Cryptoexchange, ukuyiguqula kancinane, yaye iya kusebenza. Njengokuba ziseko onlineshop. Kodwa imveliso onjalo akazange ayisekho. Ukuqinisekisa intando leyo ndaba, Ndaqonda ukuba ndifuna ukubhala yonke into ukususela ekuqaleni futhi uqonda konke ngokweenkcukacha.
Ukubala ishishini imodeli yonke. Ngelo xesha sasisebenzisa bitcoinwisdom – omnye izibonelelo yokuqala apho ubona indlela imakethi ihamba, nokuhlalutya yonke usuku, inyanga, ubone imiqulu. Umzekelo, ukutshintshisana ngosuku olwenziwe isebenzela 5000 bitcoins ngeqondo exchange yoxhomekeko $ 500. Exchange Commission – 0.4%. 500 lithi liphindaphindwe 5000 nokuba ngu 0.4 kwaye sifumana inzuzo mhlawumbi ngosuku.
ke, imodeli oshishino ukutshintshiselana Kuyinto elula?
Ewe, Ndiyakholwa ukuba xa kukho nto inzima kakhulu, ke akuyi kusebenza, ukusebenza kuphela izinto ezilula.
Ukulungiswa iinkcukacha. Ndimele ndithi ukuba sabelo yobugcisa lokuqala mna ndadala kwaye isiphumo wafumana izinto bohluke, ngenxa yokuba andizange ukuqonda inani elikhulu kakhulu iinkcukacha, amaxesha ukuba kwabonakala kum kubaluleke kakhulu ukuba zibaluleke kwaphela, kwaye ngokuchasene. Eli libali eqhelekileyo.
Ndixelele kabanzi, na indlela yokwenza TS? Phi yena ukufumana ulwazi?
Ngela xesha, I bakurholela phezu ukutshintshiselana ezininzi, ebona indlela zenzeka DDoS ukuhlaselwa, wabona indlela Exchange, zawa, Ndabona, xa abasebenzisi babethembekile exchange, naxa azange, yaye kutheni kwenzeke. I yahlelwa ngokwemiqathango yamagunya kumava am, Ndenza imveliso apho mna umrhwebi bekuya kuba ekhululekile. Ndandifuna yonke imisebenzi ukuze ziqondwe. I wasebenzisa inkqubo ukwenza i interface, apho wasondela 25 amaphepha site elizayo kwaye wakha logic yayo. Ngaphezu, onke Cryptoexchanges ababangela ezifanayo.
ozisebenzisileyo izisombululo ukulungele ezenziwe technical kangakanani?
Ndandifuna ukusebenzisa ukufumana nokuthumela bitcoin blockchain.info. Ngela xesha, ke wasinika API kawonke. Ngelo isanda, kwabonakala kum ukuba kwanele ukufumana imveliso kangangoko kwiindleko engephi, yaye emva koko nje ukuphucula nokuphucula into nganye. Ke nina namkhanyela ke thina, ngaphandle ecacisa izizathu. Ndicinga ukuba le yenye yokusilela kakhulu yimpumelelo ezenzeka. Sagqiba ekubeni bana phandle imisebenzi indlela Bitcoin, yaye babhala iklayenti lwethu ngokupheleleyo ukususela ekuqaleni, nto leyo ngoku ukuphucula rhoqo. Yiyo i, esinayo Bitcoin Wallet yethu.
Lo Team. Kakade ngase iqela kakuhle nelungelelanisiweyo, nabo sisebenza kwiiprojekthi ezimbini. Kodwa ndaqonda ukuba asinalo amava ngokwaneleyo ukudala imveliso umgangatho kwi cryptosphere. ngoko ke, siye sagqiba ukumpompa ulwazi lwethu kunye imisebenzi eyongezelelweyo, umzekelo, inxaxheba kuphuhliso zokuzikhusela DDos-ukuhlaselwa, iinkonzo ngokufumana imali, kwaye nangokunjalo. Iminyaka emithathu siye sasebenza ngomhla isabelo zobugcisa ngaxeshanye – kwiiprojekthi zeqela lesithathu ukuqonda imisebenzi ngayo yonke into. Ngenxa kule, nathi ndade ndaqhelana iingcali wancedisa phambili project yethu.
Eyona banal imali. Ekuqaleni, Ndakwazi ukuqokelela malunga $ 300,000. Lo ngunyaka leqela badwelisi benkqubo, iindleko ubuncinane, kodwa ngaphandle malunga neenkonzo zomthetho. Kodwa kwaba 2013. ngoku, Ndiyacinga, ubuncinane $ 1 million iyafuneka. Saqala kwindawo ezahlukeneyo zokhuphiswano kwaye kwezinye iimeko, kuphela ke kwakukho 5 stock Exchange, kwaye ngoku kukho amakhulu kuzo.
Yintoni na sendawo kubasebenzisi bakho?
lonke ihlabathi, kodwa ngoku ithintele sobhaliso esivela eMelika ngenxa yeemeko ezisemthethweni.
Bangaphi abaqeshwa ababandakanyeka yokhuseleko?
Ukuba kukho umsebenzi ongxamisekileyo, ngoko iqela lonke inxaxheba kuyo, yaye kungakhathaliseki ukuba kwenzeka ntoni ngexesha.
Ingaba kukho nenala okufumana semngciphekweni? Ke ngoku ntoni?
Olunye usuku, avela kuhlawulelwa ngokufumana ithuba ukuqhatha umphathi ye-imeyile. Inyaniso, akaba okunene nokuqalisa it, kodwa isondlo ukuba basebenzise eli sesichengeni.
Nokuba kangakanani bahlawula?
A ezingamakhulu ambalwa, imali encinci, ekubeni oku ukulimaza kakhulu. Thina uluhlu lwe iindleko okufumana abo okanye ezinye semngciphekweni.
Zeziphi ngababini urhwebo kwi exchange yakho?
njani Ndibeka umqondiso yam exchange yakho?
Sinento icandelo xa ufuna ukudibanisa iingqekembe, kwaye sibonisa ngokucacileyo ngubani sinako ukudibanisa owenza ukuba.
Enkosi ndlebe umdla
Ilungiswe yi CryptoRadio team
Post Next:Canadian crypto exchange Coinsquare uphakamisa $ 30m
Rosia Bence uthi:
EyoMdumba 12, 2018 e 5:28 AM
make money on youtube views uthi:
EyoMdumba 12, 2018 e 2:51 PM
New Cryptocurrency Giving Away Free Coins uthi:
EyoKwindla 1, 2018 e 9:58 AM